Però : Rava Ilay Piramida Tranainy · Global Voices teny Malagasy
Però : Rava Ilay Piramida Tranainy
Nandika (en) i Elisa Thiago
Voadika ny 29 Septambra 2013 0:04 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Italiano, Nederlands, Français, Català, বাংলা, Português
Ity lahatsoratra nosoratan'i Jessica Mota ity dia naparitaky ny sampan-draharaha Breziliana “Agência Pública” – fanaovan-gazety mpanadihady ao anatin'ny andiany #PatrimônioAmeaçado ( Lova tandindonin-doza, amin'ny teny Portigey), tamin'ny 21 Aogositra 2013.
Tamin'ny efatra ora folakandron'ny 29 Jona no nandrenesan'i Estequilla Rosales, Peroviana 51 taona, feo avy ery amin'ny toerana misy ireo vakoka, toerana fantany tsara mihitsy. Amin'ny maha-filoha lefitry ny fikambanana Kapaq Sumaq Ayllu [sp] azy nandritra ny 14 taona dia tompon'andraikitra amin'ny fanampiana ny fiarovana ny lova ara-kolotsaina any Però izy, tany 45 hektara misy vakoka samihafa any El Paraíso ary iray amin'ireo antitra indrindra sy midadasika indrindra any Però izany. Eo amin'io ampahan-tany io no andaniany ny androny, ary teo akaikin'ny havoanan'i Santa Josefina no nananganany ny tranony.
Avy aminà zavatra tsy nampoiziny eny fa na dia any anatin'ny nofy ratsiny aza, no niavian'ilay feo. Lehilahy maromaro mampiasa milina lehibe handravàna ny iray amin'ireo havoana kely tranainy iraika ambin'ny folo voarakitra ao amin'ilay toerana. Ao ambanin'io havoana kely io no misy piramida efa talohan'ny vanim-potoana Inca, izay niorina efa ela be, efatra ka hatramin'ny enina metatra ny haavony ary 2,5 kilometatra tsimivadimandry ny velarany.
Ny toerana izay nandravàna ilay piramidan'i El Paraiso, araka izao ahitana azy eo amin'ny fasika izao . Sary: Jessica Mota / Agência Pública
“Kivy aho, tsy hitako izay natao, satria tsy mba misy telefaona azo iantsoana aty. Ny nataoko dia ny niakatra teny an-kavoana ary niteny ireo mpiambina hiantso mpitandro filaminana “, hoy i Estequilla:
Mahatsiaro tony kokoa aho izao. Fa tamin'ny fotoana nisehoany, nalahelo mafy mihitsy aho, toy ny hoe olona iray izay tena tiako ilay izy. Koa satria ampahany amin'ny fireneko io, dia novonoin-dry zareo izany ny maha-izaho ahy sy ny kolontsaiko. Azo lazaina hoe famadihana tanindrazana izany. Tena malahelo mafy aho fa Peroviana iray no minia tsy mahalala ka mahavita mandrava tahaka izao.
Ny toerana ahitana ny faritra misy ny vakok'i El Paraíso ao amin'ny fanjakan'i Lima Però . Sary: Bruno Fonseca ho an'ny Agência Pública
Ao anatin'ny faritra iray izay ahitàna firongatry ny fampiasam-bola amin'ny resa-panorenana no misy ny faritra mitahiry ny vakoka samihafa ao El Paraiso, ora iray avy any Lima ary ao amin'ny faritr'i San Martin de Porres . Tamin'ny 1950 no nahitana azy ary tsy nampiasaina mihitsy hatramin'ny volana desambra 2012, fotoana nanombohan'ny tetikasa nataon'ny Minisitry ny Kolontsaina. Arakaraky ny androsoan'ny taona, no nahalasa tsikelikely ny faritra manodidina io toerana io ho fananan'olon-tsotra. Ankehitriny, ny sisinn'ilay faritra mitahiry vakoka mihitsy no toerana anombohan'ny fambolena sy ny faritra nofaritan'ny olona ho fananany manokana.
Misy piramida 12 voarakitra ao amin'io toerana io. Efa namboarin'i Fredéric Engel, ilay Soisa mpandinika vakoka, teo anelanelan'ny 1965 sy 1966 ny iray lehibe tamin'ireo. Tamin'ny Janoary 2013, nahita porofo azo ilazàna fa mitovy fahelàna amin'ny piramidan'i Ejypta na ny sivilizasiona tany Mezopotamia ny tompon'andraikitry ny sehatry ny fikaroham-bakoka ao amin'ny Ministeran'ny Kolontsaina Peroviana. Teo anelanelan'ny 4.500 sy 4.800 taona, izay azo lazaina fa iray amin'ireo niandohan'i Amerika Latinin-tsika. Io no porofo fa efa ela talohan'ny Espaniola, ny Fiangonana eny fa na dia i Kristy aza, dia efa renivohitra manana ny maha-izy azy i Lima.
Hazavain'i Marco Guillén, lehiben'ny mpandinika vakoka amin'ny tetikasa karakarain'ny Ministeran'ny Kolontsaina any El Paraiso fa :
Iray amin'ireo tanàna vitsy maneran-tany izay ahitana fitohizanà kolontsaina naharitra fotoana ela izy. Ary tombony lehibe ho azy izany.(…) Lima, renivohitry ny tanàna, no manana ny waka antitra indrindra (vakoka tranainy sady masina) any Però. Izay no fomba hisehoan'ny sivilizasiona eto. Ny fandravana ilay piramida dia toy ny fandrovitana pejy iray eo amin'ny bokin'ny tantaran'i Però. Tsy misy fomba hahafantarana izay zava-nitranga.
Nisy piramida teo afovoan-dàlana
Raha avy any Lima ho any El Paraiso ianao dia tsy maintsy mandray fiara fitaterana microbus – karazana fiara izay mahazaka olona betsaka noho ny fitaovam-pitateram-bahoaka hafa any Lima – mandra-pahatonga eo amin'ny tanànan'i Pro. Làlana 40 minitra manavatsava ny fifamoivoizana mikitaontaonan'i renivohitra Peroviana. Avy eo indray dia misy fiara microbus roa handray anareo ho eny amin'ny fiara, akaikin'ny toeram-piantsonana, entin'ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Kapaq Sumaq Ayllu. Ngazana fa ahitana trano kely tsindraindray ny tontolo jerena. Rehefa tonga eo akaikin'ilay làlan-kely mankany amin'ilay faritra ianao dia hahita toeram-panariana fako tafo lanitra, karazana voromahery sy ankizy mitady kilalao ao anatin'ny loto.
“Nony tonga izahay, dia nisy takelaka nisy sora-baventy isaky ny havoana. Heverin'izy ireo fa azy ireo ity toerana ity hoy ny iray amin'ireo mpandinika vakoka. toy izao no vakin'ny soratra ” tanin'olon-tsotra azo tamin'ny 8 Aogositra 1984″, arahan'ny mombamomba ilay tany sy ny laharanan'ny boky. Sary avy amin'i Jessica Mota / Agência Pública
Mahita rindrina manaraka ny sisin-dàlana aho. ” Rindrina io ” hoy ny fanazavan'i Miguel Castillo, tompon'andraikitry ny tetikasa El Paraíso, izay mipetraka ery aoriana. Tato aoriana kely dia hitako fa 30 kilaometatra ny halavan'ilay rindrina ary manodidina ireo havoana ao amin'ilay faritra. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia voakipilin'ireo fotodrafitr'asa sy tanin'olon-tsotra izany.
Hamafisin'i Castillo fa :
Tsy mahavita azy ny governemanta. Manana fitaovana hampirantiana sy hiarovana ireo waka izy nefa tsy nanao na inona na inona. Tahaka izany ny any Brezila, ny any Arzantina… Ny fandavan-tenan'ireo olom-bitsy, ireo mpandinika ny vakoka no sisa ananantsika. Saingy tsy ampy izany.
Nisy nanafika ireo mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Kapag niaraka tamin'ireo mpiambina tamin'ny herinandro lasa. Mba ho fiarovana bebe kokoa, dia nisy mpiambina iray niaraka tamin'ny vondrona nisy anay – niaraka tamin'ireo ekipan'ny mpandinika vakoka rehetra – tamin'ny fandehanana teny amin'ny faritra nisy ilay piramida rava.
Amin'izao fotoana dia mipetraka eny an-tampon-kavoana, manara-maso ny manodidina ireo mpiasa teratany nokaramaina teo aloha hanao ny fandavahana. Nohamafisina avo roa heny ny fiarovana taorian'ny nandravàna ilay piramida. Misy mpitandro filaminana efatra miaro io toerana io andro sy alina, ary mpiambina roa avy aminà orinasa tsy miankina izay karamain'ny Ministeran'ny Kolontsaina, ary dia manao ezaka lehibe ry zareo hanaraha-maso ilay tany manontolo mirefy 45 hektara.